… – Radio Daljir
Galkacyo, Oct 22 ? Roobabkii Dayrta ayaa mar kale si wanaagsan uga hooray deegaanno badan oo ka mid ah gobollada Puntland gaar ahaanno gobollada Mudug iyo Nugaal oo horay intooda badan looga helay roobab lagu diirsaday.
Roobabkaan dambe oo kala da?ay xalay illaa iyo saaka ayaa badankiisu maasheeyey deegaanno baaxadleh oo ka mid ah gobolka Mudug iyo sidoo kale meelo dhulal aan aad u badnayn oo gobolka Nugaaleed ah, roobabkaasi oo ku soo beegmay xilli kicin iyo kulul xagga cirka ah lala jiif iyo joogsanba waayey.
Roobabkii da?ay xalay iyo saakaba meelaha ay sida weyn u doojiyeen waxaa ka mid ah gobolka Mudug oo ay roobsadeen degmooyinkiisa Galkacyo, Galdogob iyo Xarfo iyo sidoo kale deegaanno badan oo degmooyinkaasi hoos yimaada.
Raxmadda da?day illaa iyo haatan lama soo sheegeen wax khasaare nafteed ah oo ay gaystay, hase ahaatee waxaa jira cabashooyin durba ka soo yeeray kaamamka dadka barakacayaasha ah ay deggan yihiin ee magaalada Galkacyo kuwaasi oo sheegtay daadad ka soo rogmaday roobka da?ay in ay xaamsadeen gurihii ay degganaayeen oo cooshado u badnaa.
Mas?uuliyiinta gobolka iyo madax-dhaqameeddo reer Mudug ah oo la soo xiriiray Radio Daljir ayaa ka-mahad-naqay raxmadda rabbi ugu naxariistay, waxayna bulshada u soo jeediyeen ku shugriga deeqda alle iyo ka dhawrsanaanta fasahaad ka dhasha nimcada eebbe ku galladay.
Roobabkaan xalay iyo saakaba ka da?ay meelaha badan ee ka mid ah Mudug iyo Nugaal, waxaa ay ku soo beegmayaan xilli gobollo badan oo Puntland ah aysan wali ka curan Dayrtu.